Njengoko i-expat abahlala e-China, ndafumana ingozi enkulu dose ka-inkcubeko shock amaxesha ngamaxesha. Nomngeni kunye ups kwaye downs ka-neli lizwe, ndiya rhoqo ukufumana ngokwam kwi-ephakathi kwiimeko ukuba mna andinaku ngokupheleleyo ukuqonda ndide dive nzulu kubo. Ngexesha abanye incopho ngexesha, ndandidibana a emangalisayo kubekho inkqubela ukuba mna ngoko nangoko wawa ngothando kunye. Countless stories ingaba kwenzeka ngomhla wethu endeavors ukuqonda ngamnye ezinye ngolwimi ukuba Yintoni weza ephuma emlonyeni wam njengokuba indlela:”ngokuqinisekileyo, kutheni na.”kwaye i-awkward ndonwabe ubuso. Mna akusebenzi khange onemincili kwaphela. Mna ke nervous, mhlawumbi. Andiqinisekanga njani zichaza kunyikima wam fingers, okanye numbing ndinovelwano wam neck, okanye butterflies wam stomach. Okungalunganga uhlobo butterflies. I-fernández, okkt. Ngokunxulumene wam mom, mna kusasa kakhulu brave umntu. Kuya kufuneka ukuba ibe yinyani, kuba yena uthi ke. Kulungile naye kanjalo uthi ufuna shouldn khange kunyikima yakho intloko emva kwakho, basele zinokuphathwa chocolate ngenxa yokuba phoselani phezulu.
Mna kwafuneka kuvavanya kwakhona ukuba wayengomnye ekunene, ngoko ke, enyanisweni wathabatha yam eseleyo manly hormones kwaye isetyenziswa kubo enroll ngokwam kwi-i-epic uhambo ukuhlangabezana bam girlfriend ke usapho Entlakohlaza Festival. Ngoko ke, apho ndandikho. Iyapakisha wam bag kwaye ecela ngokwam ukuba eli lelona stupid unye ehlabathini, okanye ukuba esi yayisisixeko esikhulu iveki kude zonke isixeko pollution kwaye usamuel. Ehleli kwi-ibhasi kuba iiyure akusebenzi khange ukuba engalunganga. Ubambe wam bladder kuba ilixa waba, nangona. Awunokwazi yeka le ibhasi kwi-ephakathi highways.
Awunokwazi yiya ukuya kwindlu yangasese ngenxa yokuba kukho ayi omnye. Yure ukuqeqesha uhambo, ngoko ke yure ibhasi ride, ngoko a ngomzuzu ke hambani elikufutshane car indawo esembinbdini yevili ngoko ke lowo ayikwazanga ukufumana yakhe girlfriend ke dolophana kwi-ephakathi kwanti. I-imifanekiso isixeko seemed ukuba zange end. Njengoko ibhasi chu travelled ngaphandle i-shanghai, emntla rivers waba ngaphezulu evident kwaye ezininzi ezincinane overpasses kwaye bridges ndenza uhambo iselwa umdla. Kukho akusebenzi khange kakhulu kokuya kwi, ngenxa yingqele amaqondo obushushu kwaye nzima pollution ukuba ezichaphazelekayo kwiphondo apha evekini. Ngexesha ezi ibhasi rides, wena basically hlala ziqinile kwaye uzole. Ukuzothi ga mna baqonde ukuba eze neenombolo wam iPad waba eyona nto ehlabathini. Mna ukufunda kakhulu, idlalwe ezimbalwa imidlalo kwaye kutsalwe izinto ezimbalwa. Kwi-outskirts yesixeko, lwasemaphandleni wesithili we Tingyu, lies encinane dolophana kunye kuphela ibhasi imigca, kwaye malunga a anamashumi iintsapho. Emva lokuqala lokuthengwa kweenkonzo kwaye isihloko, mna ngoko nangoko onayo invited ukuba nihlale emva kwaye uyakuthanda a wamkelekile meal. Andisoze admit oku: ndiza ngokupheleleyo ok kunye Isitshayina ukutya. Mna anayithathela balingwe a itoni enye izinto ezahlukeneyo kwaye ndandisazi okulindeleyo. Oku kwaba iselwa enjoyable. A meal kakhulu ibalulekile Isitshayina inkcubeko. Uninzi multi-million uya kufumanisa ukuba kwenzeka ntoni yonke imihla kwi-China, uninzi kusenokwenzeka ukuba kwenzeka ngexesha ishishini meal. Ngendlela efanayo fashion, ngexesha Entlakohlaza Festival, yonke imihla nsnp ziindleko ezinkulu ithuba babambisa phezulu kunye relatives, get ukwazi entsha oonyana kwi-mthetho kwaye celebrate komnye unyaka ubutyebi, impumelelo kwaye fortune. Sliding kancinci kwi-ukutya isihloko: ngu umdla indlela encinci iziqephu Isitshayina cuisine yenza lula kuba omkhulu amaqela abantu ukuba ungabelana ngantoni. I-chopsticks gcina ukutya kwi-bite-sized iziqephu, dibanisa ivumela yona elihle phantsi ngexesha kuyo travels ukususela zinokuphathwa plate ukuba umlomo wakho. Kwi yayo yonke, ngu glplanet indlela ukuqhagamshela enyanisweni neqabane lakho ukutya, ngaphandle artificiality ye-zesilivere cutlery. ngexesha i-nsnp, ingakumbi ngoba jikelele ABV, kwaye yenza kum yiya ukusuka kwiqanda hero kwi imizuzu. Bam girlfriend ke, abazali ndaqonda kwaye babe sele elungiselelwe oku kwimeko yesi. Baye kanjalo weva stories malunga foreigners disliking ukomelela zabo utywala, ngoko ke babe nokulungiselela jikelele cans le tasty beer. I-nsnp kwi-eli fashion kwenzeka phezu kwaye phezu kwakhona ngexesha elandelayo imihla. Non-stop imvula lokutya kwaye utywala kwitheyibhile. Ke iselwa ngokufanayo kuba abantu kanjalo umsi ngexesha a meal, ngoko ke ukuba akusebenzi khange a shocker xa sukuba wanikela kum a cigarette. Uninzi izihloko lixoxiwe ngexesha nsnp babesele omtsha factories ezikufutshane, urhulumente, abantwana kwi-usapho, abantu yokufumana watshata, relatives kwi-trouble, otyebileyo abantu, amahlwempu abantu, ukutya, njalo-njalo. A baninzi umboniso ka-eqhelekileyo iingxoxo oko bekuya kwenzeka naphi na ongomnye. name uncle, clumsily bouncing kwi kweendonga, uzama ukufumana ngaphandle indlu kwaye yelling ngalo abantu jikelele kuye. Oku iselwa ngokufanayo kwi-Ecuador, ngoko ke, mna figured, utywala wayeya kunikela kum efanayo jonga apha. Mna ke ethabatha kuba hangovers. Ke ngokwenene a compacted remix ka-Vitamin B, abanye Liver enhancing herbs kwaye giraffe. Esisebenza, ndiyaqonda. Bucala ukusuka bonke ukutya amava, phawula le uhambo waba ngokuqinisekileyo usapho ukuhlanganiswa kwaye uxolo ukuba azise ukuba uhambo. Phambi kokuba le mini, bonke ndandisazi baba stories zonke ezi iimpawu kwi-bam Girlfriend ke ubomi. Intlanganiso nabo kwi-umntu bandinceda ukuqonda kakhulu izinto malunga yakhe ubomi. Yena ivela kakhulu, thobekileyo usapho, abazinikeleyo ukukhulisa izityalo ezincinane entsimini, nizihlanganise amandla kuba ifama izithuthi kwaye idala kubasindisa imimandla kuba nzima oomatshini. Emva studying Yokusingqongileyo Science kwi kufutshane nesixeko, yena bafudukela kwindawo andwebileyo metropolis ka-i-shanghai. Xa yena zahlangana i-engaselunxwemeni ihlabathi, yena wehla ngothando kunye yelenqe indalo kwaye umntu-made structures kwaye waba umphakathi designer ukuba yena ngoku. Mhlawumbi ngenxa yabo abantwana ekugqibeleni kuba waphula ukusuka babo imisebenzi kwaye dedicate abanye ixesha usapho. Ngu saddening realization indlela efanayo lento kunye wam ubomi obubobakhe, kokuqwalasela ndizama ukuphila ixesha lendawo kude abazali bam. Emva lokuqala isihloko kwaye inkcazo emfutshane into ndiyakwenza, ndeva ngathi mna waba engabonakaliyo kubo, kwaye mna waba enye umntu ehleli kwi-usapho itheyibhile. Ngexesha lam, uninzi aba bantu mna ke intlanganiso asikwazanga ngenene kuthetha mandarin, kodwa kuyo dialect ukuba differs kakhulu. Nkqu ukuba ndibe nento yokuba ibe fluent, wouldn khange kuba bandinceda ukuba kakhulu. Mhla. Ukuzothi ga, mna baqonde ndiza basically boarding umtshato boat msinyane mna ngena kwi-abazali bam kwi-mthetho ke hometown. Ndaye ngena kwi-zabo town. Ndaye ngena kwi-zabo yard. Ndangena ngaphakathi zabo indlu. Mna wasitya zabo ukutya. Mna stole a candle ukuba smelled comment. Omnye wemiceli-contrasts phakathi i-shanghai kwaye bam girlfriend ke hometown yi-bume. Zezulu umgangatho ngu kwazeke ukuba abe omnye purest kummandla, kwaye nangona kwakukho engalunganga zelifu ka-pollution ukuba weza ukusuka emntla ntshona elidlulileyo imihla, ubusuku wanikela kum a imboniselo iinkwenkwezi ukuba mna akhange na ebone kwiminyaka. Isitshayina invented i-gunpowder, ngoko ke baya kuthabatha ikratshi kwayo kwaye shove ngayo kobuso benu (iindlebe.) nge-firecrackers kwaye fireworks. Xa ufuna ilizwe kwi-China okokuqala, kufuneka ikhuselwe nge-i-engabonakaliyo shield. Awunokwazi ukufunda, awunokwazi ukuqonda. Awunokwazi mamelani, awunokwazi Emva ekhaya, kuya kwenzeka ntoni i-opposite. Nisolko ixakeke kakhulu ukuqhubela i-nasiphelo ulwazi ekubeni fed nge-radio, i-tv, billboards, imiqondiso, iincoko, njalo njalo. Ulwimi barrier kwi-China ikuvumela ukuba ukuchitha ngakumbi ixesha kunye yakho ebalulekileyo mna. Abantu abaninzi bedlule oku isigaba ngomhla wabo kuqala unyaka, ukusebenza idla vanishes emva koko ngokwe xesha. Ubukhe musa ngokwenene ukufunda mandarin Isitshayina, nawe kusenokwenzeka ukuba uninzi ukuchonga izakhelo, kwaye ngesiquphe yakho umyalelo wokhuselo ngu bemkile. Uyazi xa wam kunjalo, oku uhambo reminded kum ukuba efanayo ndinovelwano. Ngesiquphe, nto sounded njenge mandarin. Yobulali dialect made it ukwenzeka kuba kum kuba nkqu slightest clue into waba ke njalo. Mna relied kakhulu kwi-bam girlfriend ukuba zithungelana, kodwa oku asikwazanga azise nawuphi na trouble yethu yonke imihla interactions abayo usapho. Ixabiso izinto apha waba ibone lomtshato mkhulu owenza ingeniso cheaper kunokuba mna imagined. Ukuza apha kwaye ukuthenga yonke into thina eziyimfuneko imihla, kuba ngaphantsi USD, waba nempembelelo enkulu. Oko reminded kum ezilungileyo ubudala imihla kwi-Ecuador, xa ukutya waba cheap kwaye bekhuselekile. Ngomhla wethu indlela emva, sithathe i-enye route, kunye ukuthelekisa iindlela. Wayengomnye trolling kum xa wenza kum hamba nge-wasteland. Kwiintsuku emva thina ifike. Mna ke ayisasebenzi a newcomer. Mna ke ndinovelwano kakhulu ngakumbi zidityanisiwe amava ndandisele ophilayo. Mna afunyanwe i-uhamba phezu, ezitratweni, humidity i-stores kwaye iindawo ukuze usebenzise amanzi vapor ukuba ubushushu phezulu emoyeni kwaye moisturize i-imigca enqamlezeneyo, mna afunyanwe i-oranges, powdered ubisi wam improvised ikofu mug, quietness ka-kwangoko mornings, xa wonke umntu ongomnye seemed ukuba abe iyalalaprocess status, umlingo aroma ka-ezicocekileyo, indlu entsha, umahluko ukuba endala moldy scent yamandulo iindawo. Ndaye unobuhle bahlobo bam. Ndaye unobuhle i-shanghai kancinci. Mna amadoda wam owakhe apartment kwaye wam cat. Ndafumanisa kancinci cat ngaphakathi name, kwaye ndaya kwi-neqabane lam fuji ukuzama ukufumana esifutshane kuye. Yena wabaleka kude, kodwa mna? zilawulwe ukufumana gcina ka-mzuzu. Emva kwi-i-shanghai, ndiza rhoqo ixakeke kakhulu ukuzama ukusombulula izinto kwaye mna xana hayi ukuba zintle indawo enako. Ukuba mna khulula phantsi onke akukho nanye ezongeziweyo, isibhakabhaka scrapers, cinga iimoto kwaye motorbikes, uncwadi, i-stores, supermarkets kwaye cellphones, mna end phezulu kunye kakhulu yendalo kwaye honest inguqulelo yintoni excites kum kakhulu: Inyaniso. Big izixeko bazele iibhonasi abantu kwaye izakhiwo. Ngakumbi, ubonisa, ngakumbi yakho waqwalasela ubutyebi. Ngakumbi uthetha, ngakumbi ukukhupha nisolko ithathwe kuba. I-tallest isakhiwo, ngakumbi i-kukrazulwa uba (nangona kunjalo awunokwazi khangela shit kwi polluted umhla). Thatha zonke ukuba kude, kwaye nisolko basically kwi-eliphakathi encinane ndawo, ezele abantu abaya kuphila babo ngemini umhla ngokwenza kakhulu humbling, oluntu izinto. Ndabuyela kwinqaku apho ndaqonda ukuba, akukho mcimbi omele ukufunda phambi, Entlakohlaza Festival ngexesha Isitshayina Unyaka Omtsha ngu mna admit ndaba omkhulu dose ka-unyamezelo booze wam indlela, kwaye ukuba bandinceda ukufumana ngokusebenzisa ngeveki, kodwa ukuba ufuna ukudlala yakho amakhadi ekunene, unako ngokuqinisekileyo kuza ngaphandle victorious, ekubeni admired kwaye hugged yi-wonke umntu kwi-usapho. Uninzi abazali ehlabathini, realization yabo abantwana lokukhula phezulu, uthi, xa sukuba kuphulukana nayo a tooth, okanye xa neentombi zabo isikhalo kuba boy, okanye xa abantwana babo ndiye esikolweni, okanye ekholejini. Kuba Isitshayina abazali, oku kanye rhoqo afike emva kwexesha, xa neentombi zabo kuzisa zabo boyfriends, okanye xa oonyana babo kuzisa zabo girlfriends. Lo umqondiso kuba nabo.
Lento xa sukuba vumelani yiya zabo intombi ingalo kwaye xa bebona yakhe crossing ezindleleni, bephethe izandla kunye nomnye umntu
← Ividiyo Dating China Ividiyo Dating Jikelele Ukuncokola nge-Ilizwe
China lencoko Ngaphandle ubhaliso FREE Online Incoko Amagumbi →